Banaanbax looga soo horjeedo Doorashada Somaliya ka dhaceysa sanadka 2016-ka in lagu saleeyo Nidaamka 4.5 ayaa waxa uu ka dhacay waqoyiga galgacyo – STAR FM SOMALIA
Banaanbax looga soo horjeedo Doorashada Somaliya ka dhaceysa sanadka 2016-ka in lagu saleeyo Nidaamka 4.5 ayaa waxa uu ka dhacay waqoyiga galgacyo
Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug, maanta waxaa ka dhacay Banaanbax looga soo horjeedo Doorashada Somaliya ka dhaceysa sanadka 2016-ka in lagu saleeyo Nidaamka 4.5.
Dadka Banaanbaxa isugu yimid ayaa waxa ay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ay ku diidan yihiin Nidaamka 4.5, waxaana Bulshada Banaanbaxa dhigeysay ay taagersanaayeen Nidaamka Degmooyinka in Doorashada lagu saleeyo.
Banaanbaxaasi waxaa soo abaabulay Maamulka Mudug ee Puntland, inkastoo aysan meesha ka muuqan masuuliyiinta Maamulkaasi, hadana Bulshada ay isku soo abaabuleen ayaa Fagaaraha laga arkaayay.
Shirka Madasha Wadatashiga Qaran ee Somaliya ayaa maanta lagu shaacin doono Nooca Doorasho ee Somaliya ka dhaceysa Sanadka 2016-ka.
Maamulka Puntland Iyo Jubbaland ayaa doonaya Doorashada Somaliya ka dhaceysa sanadka 2016-ka in lagu saleeyo Hanaanka Degmooyinka halka Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay doonayaan nidaamka 4.5.
Lama oga nooca ay noqon doonto Doorashada Somaliya ka dhaceysa, waxaana la wada sugayaa waxa ay isla gartaan Madaxda shirka uga socda Magaalada Muqdisho.
Ururka al-shabaab ayaa ka hadlay isbaheysiga looga dhawaaqay magaalada riyaad
Wararka13 mins ago